Soavaly ampahefatra: inona izany, ohatrinona ny fihazakazahany sy ny toetrany | Soavaly Noti
Jenny monge | | Fanararaotana sy tsy fananana trano, Karazan-tsoavaly
Ny soavaly Quarter, na soavaly Quarter, dia a karazana soavaly avy any Etazonia izay mety indrindra amin'ny hazakazaka fohy (400 metatra), ho an'ny karazana fifaninanana sy fampirantiana rehetra mifandraika amin'ny rodeos sy toy ny soavaly soavaly. Izy io dia karazan-javamaniry manana biby voasoratra anarana betsaka indrindra manerantany, mihoatra ny 4 tapitrisa, izany no mahatonga azy io ho iray amin'ireo malaza indrindra.
Voalaza ny momba azy fa soavalin'ireny omby vavy sy tantsaha velona sy maty mitaingina soavaly ireny izy. Hahafantatra azy bebe kokoa ve isika?
2 Ny salan'isa ao anatin'ny Quartre a Mile araky ny fampiasana azy ireo
Taolana mahery, vatan'ny hozatra mahery ary ny haavony izay eo anelanelan'ny 142 sm sy 163 cm, ny Quarter Horse dia manana tratra malalaka sy volo boribory. Ny lohany kely misy mombamomba mahitsy, manan-tsofina fohy sy tena mivezivezy, ary koa maso velona izay manome azy fanehoana faharanitan-tsaina. Zavatra izay tsy mijanona amin'ny fisehoana fotsiny, satria voalaza momba azy ireo fa saika maminavina ny fikasan'ny mpitaingina azy hanao hetsika haingana amin'ny toerana voafetra izy ireo. Izany no mahatonga azy ny Equine Cowboy ideal, Tsy izany ihany noho ny fahaizany mitaingina tsara, fa satria ankoatran'ny a mpihazakazaka tena tsara raha lavitramanana fanoherana lehibe ny dia lavitra raha ilaina.
Izy io koa dia a biby tena tsara hiara-miasa amin'ny biby fiompy ary izany dia manana a tony toetra, tena tia fiaraha-monina sy saro-pady, tiany ny miaraka amin'ny olona.
The Quarter Horses, afaka manana karazana loko palitao izy ireo. Afaka mahita ny akanjo fototra rehetra isika: mainty, volontsôkôlà, chestnut ary chestnut; karazan-karazany miovaova toy ny crème, dun, champagne ary perla. Ho fanampin'izany, amin'ny tranga sasany dia mipoitra ny lamina misy ny roan na ny liart, na ny modely volondavenona, izay nesorina tsy ho ela ary ankehitriny dia niaiky tao amin'ireo masontsivana ireo izay azo oharina amin'ny karazany madio. Ny sosona matetika indrindra dia ny saora na sorrel (an'ny mena mena) amin'ny karazany «sorrel», izany hoe, ny volom-bolo izay mitovy loko amin'ny volon'ny vatana (ho an'ny sasany dia midika hoe voasasa voasasa io karazana io, saingy tsy izany no izy).
Ny salan'isa ao anatin'ny Quartre a Mile araky ny fampiasana azy ireo
Soavaly tandrefana («Karazan-tahiry»), ampiasaina amin'ny fifaninanana amin'ny famolavolana, fanapahana ary fisarahana, fifamatorana zanak'omby, familiana familiana, familiana, familiana sy fisarahana misy ity karazana ity.
Asehoy soavaly («karazana halter»), izay manjaka ny ozatra mihabe loatra, mitazona ny loha ho kely sy voadio. Ny haavony dia eo anelanelan'ny 154 sy 163 cm ary ny lanjany dia mety hahatratra 546 kg.
Racehorse ("Karazan-tsarety sy mpihaza"), Matetika izy ireo dia manana halava lava sy lava tongotra, fa ny toerana ahatongavany dia ny fanaovan-javatra mifanaraka tsara izay ahafahan'izy ireo manafaingana mipoaka. Ny hazakazaka dia atao am-pomba ofisialy amin'ny hazakazaka amina hazakazaka 11 misy lavitra, eken'ny American Quarter Horse Association (AQHA) ankehitriny, manomboka amin'ny 220 yards ka hatramin'ny 870 yard.
Alohan'ny hanombohantsika hiresaka momba ny niandohan'ny soavaly Quarter, dia hanome anarana sy hanazava ny sasany amin'ireo zava-misy ara-tantara nisy fiantraikany izahay, ho fanampin'ireo fitoviana ireo, karazana soavaly soavaly ankehitriny.
Teo anelanelan'ny taona 711 sy 726 dia nitranga ny fanafihana silamo ny Saikinosy Iberia. Tamin'izay fotoana izay, rehefa nisy karazany roa ny karazan-jazakely nanan-kery indrindra tamin'ny fananganana karazana vaovao, dia tonga tany Eropa: ny soavaly Arabo sy Berber avy any Afrika Avaratra. Samy manana ny anjara toerana lehibe amin'ny soavaly espaniola, portogey ary frantsay.
Taonjato maro taty aoriana, Tamin'ny 1519 dia tonga tany amin'ny tontolo vaovao i Hernán Cortés nitondra soavaly 32, ka anisan'izany ireo avy tany amin'ny Lohasahan'i Guadalquivir na Marshes sy soavaly izay samy avy amin'ny Arabo sy Berber. Ny tantara manaraka dia fantatra kely kokoa, soavaly sasany nandositra, lasa soavaly maroon izay miteraka sy miely manerana ny kaontinanta. Karazan-javamaniry isan-karazany no nipoitra avy tamin'ireo soavaly dia toy ny Mustang.
Tamin'ny taona 1800, ny lemaka atsinanan'i Etazonia dia feno soavaly soavaly, loharano fitoviana ny Indiana Amerikanina, de Nianatra nampandeha azy ireo izy ireo, nanjary mpitaingin-tsoavaly tena tsara, ary nanomboka nitazona soavaly. Mpanavakajika tsara izy ireo ary nanao lakroa isan-karazany hahazoana soavaly tsara kokoa ho an'ny ady sy asa. Ohatra tsara ny soavaly pinto, fantatra amin'ny anarana hoe "Ny soavalin'ny Indiana."
Ny hetsika ara-tantara hafa izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny Quarter Mile dia ny fanjanahan'ny anglisy sy frantsay ireo faritany avaratra. Amin'ny fahatongavan'ny Anglisy dia tsy miresaka momba ny mitondra ny English Thoroughbred amin'izy ireo izahay, mbola tsy nisy izany hazakazaka izany.
Any Eropa amin'ny ankapobeny, tsy izany ihany Any Angletera, Tsy dia matetika ny manana soavaly raha tsy manankarena ianao, satria lafo dia lafo ny mpitaingina soavaly. Noho izany, ireo nanana ireo biby ireo dia nantsoina hoe "Knights", izay nampiasa azy ireo koa tamin'ny ady. Ireo mpitaingin-tsoavaly ireo dia tsy maintsy nanohana ny lanjan'ilay mitaingina azy ihany fa ny an'ny fiadiany koa soavaly lehibe nitovy tamin'ny soavaly soavaly ireo. Ary etsy ankilany, ho an'ny famindran-toerana dia nanana soavaly hafa kely toa ny ny Connemara any Irlandy na ny Galloway any Ekosy. Ireo, na dia eo aza ankizy kely, Erana hozatra, matanjaka, mahazo aina amin'ny mitaingin-tsoavaly ary manana toetra maha-izy.
Teboka iray hafa tsy tokony hadino fa ny ankamaroan'ny mpifindra monina anglisy dia mponina tao an-tanàna mitady ho avy tsaratsara kokoa ary raha manana soavaly izy ireo dia iray amin'ireo toekarena.
Ho fanampin'izany, amin'izany rehetra izany dia tsy maintsy ampidirintsika ny fameperana fa ny soavaly amina karazana anglisy, ireo soavaly tsara, dia tsy afaka nandao ny firenena hiteraka ao amin'ny Tontolo Vaovao. Ity famerana ity dia hiantohana ny fahadiovan'ny karazany ary zavatra izay mbola manan-kery ankehitriny any amin'ny firenena sasany, toy ny soavaly Islandy.
A ireo soavaly izay nentin'ny Anglisy ireo, Izany dia nanjo azy ireo nitovy tamin'ny an'ny Espaniola, afa-nandositra izy ireo na navotsotra ary niditra tamin'ny andian'ny soavaly dia.
Zava-misy iray hafa izay tsy maintsy omena anglisy dia izany Namindra ny fitiavany tamin'ny hazakaza-tsoavaly tany Amerika izy ireo, izay efa nalaza ny hazakazaka lavitra ezaka.
Ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa dia nanao hazakazaka ampahefa-kilaometatra fohy (402 metatra eo ho eo) lasa malaza be, satria io no refy fandrefesana ny araben'ny ankamaroan'ny tanàna, ary mba hanaovana hazakaza-tsoavaly dia ilaina ihany ny manaiky fa nanomboka teo am-piandohan'ny arabe izy io ary nifarana tamin'ny faran'ny azy.
Tokony ho tamin'ny 1730 dia nanafatra soavaly Thoroughbred anglisy ny mpanjanatany mba hifaninana sy hiompy amin'ny vadin'ny Amerikana. Iray amin'ireo soavaly malaza indrindra i Janus, zafikelin'ny Godolphin Arabo, teraka tamin'ny 1746 ary nafarana tany Virginia avy amin'i John Randolph tamin'ny 1756.
Tsy afaka milaza izany Janus no soavaly nanangana ny hazakazaka Quarter-Mile, fa ny azy zanaka izay matevina sy matanjaka, dia hisy akony lehibe amin'ity karazany vaovao ity.
Soavaly iray hafa manan-danja indrindra dia Tompoko archy, teraka tamin'ny 1805, izay ny taranany no nanan-kery indrindra teo amin'ny fampandrosoana ny hazakazaka Quarter Mile. Cooper ambany, vovoka vy ary Shilo no mety ho zaza nanan-danja kokoa izy ireo satria izy ireo no soavaly nanangana ny hazakazaka Quarter Mile ry zareo. Tamin'ny taona 1844, tonga tany Texas ny Steel Dust ary taona vitsivitsy taty aoriana dia tonga i Shilo, avy amin'ny firaisana tamin'ny zanakavavin'ny voalohany ary zanakalahin'ny faharoa, teraka ilay soavaly Billy izay niavian'ny Texan Quarter Horses.
Ho marina izany any Texas izay Ity karazana soavaly ity dia nijanona ho hazakazaka fohy fotsiny, ary ho lasa karazana soavaly omby omby. Teo no nanatontosan'ny Quarter Mile anjara lehibe amin'ny tontolon'ny indostrian'ny fiompiana, miaraka amin'ny fahaizany lehibe amin'ny fanentanana ny biby fiompy.
Taorian'ny ady an-trano dia nanomboka nipoitra ny fiompiana omby. Tamin'ny voalohany dia nangonina tany an-tsaha ireo omby, niara-nambenana ary nalefa tany anaty vala. Mba hamindrana ireto andiam-biby ireto any avaratry ny firenena dia nampiasa ny lalamby izy ireo tany atsimon'i Texas. Ny fahatongavan'ny Quarter Mile dia ampahany amin'ny revolisiona kely. Hitan'ny Cowboy ny toetra voajanaharin'ity zana-kazo Equine ity mba hanao ny asa amin'ny toeram-piompiana, mitrandraka sy miompy omby, ankoatry ny fifaninanana amin'ny hazakazaka toy ny fanaony hatramin'izao.
Amin'ity fifangaroan'ny genetika ity, hita hatreto, mila manampy iray hafa ianao vao vita ity karazany vaovao ity: ny mustang. Ireo soavaly soavaly kanto ireo dia niampita tamin'ny taranak'i Janus sy Sir Archy, namita ny hazakazaka telovolana.
Ao amin'ny 1940, vondron'olona mifandray amin'ny soavaly any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Etazonia, ao anatin'izany ny mpiompy sy ny mpiompy, nanangana ny American Quarter Horse Association (AQHA) hitahiry ny tetirazan'ny soavaly Cowboy Quarter Horses.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Soavaly telovolana